Moksha အဘိဓါန်, Nirvana အတွက်ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုလွှတ် … | Espacio de Palabras de Luz
← Libro “La rosa del desierto – Talwardat nljla” Tapa blanda – sep 2019 de Etxarri Yábar, Maika (Autor) disponible ya en Amazon
Απελευθέρωση της ψυχής μου στο Moksha, στη Nirvana … →
Moksha အဘိဓါန်, Nirvana အတွက်ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုလွှတ် …
Publicado el 19 septiembre, 2019	por palabrasdeluzypaz
အဖြူရောင်သင်္ကန်းအက်ဆင်း, အထီးကျန်အအေးမြို့ရိုးကိုများထဲတွင်အသက်တာ၏နောက်ဆုံးအသက်ရှုထွက်တတ်၏။ မိုးရွာရွာအသံ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်မုန်တိုင်းအသံ။ ထိုအသင်ကိုယ်သင်မေးပါ: အဘယ်မှာရှိသနည်း ကြှနျတေျာ့လူ့ဂုဏျသိက်ခာကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း
ဤတွင်ဘယ်သူမှကိုယ့်တစ်ဦးကဗျာဆရာရယ်, နားထောငျ။ ဒါဟာအေးနှင့်အဖြူရောင်သင်္ကန်းကိုရောက်ရှိ … ငါသည်မိုဃ်းရွာစေ၏ချိုမြိန်အသံကိုနားထောငျ, ငါသည်ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးကိုနားမထောင်သော်လည်းအဘယ်သူမျှငါ့ဝိညာဉ်၏ပြောဆိုချက်ကိုကြားဘာကြောင့်လဲ ကျွန်မမေတ္တာပွေ့ဖက်, သာခဏ, အကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုနွေးဖို့အားပေးမှုစကားလုံးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ် …
အဖြူရောင်သင်္ကန်းများထဲတွင်အထီးကနျြ, ငါ၏နောက်ဆုံးအသက်ရှုလှ … အိပ်မက်စိတ်ကူးလိုသော: ပင်လယ်လှိုင်းတံပိုးကိုထာဝရငြိမ်သက်ခြင်း၏မှော် … ပင်လယ်, တိတ်ဆိတ်, Seagull နှင့်လှိုင်းတံပိုး၏အသံသည်။ ငွိမျးခမျြးရေး, ငါ့ဖြစ်လျက်ရှိမှတဆင့်ပြေး … ငြိမ်းချမ်းသောဘယျလိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို! ဖြစ်တည်မှု၏သူတော်ကောင်းတရားအချိန်လေးတစ်တသက်တာ၏ပတ်သက်သောမြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများ။ ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျထံသို့လာအဆုံးမဲ့ငြိမ်သက်ခံစားချက်တွေကို … ငါခြော့တစ်ဦးနမ်းခံစားရတယ် … မျက်ရည်ငါ့အ rosy ပါးပေါ်လဲကျ …
ငါအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်ပဌနာစကားကိုနားထောငျ။ အဘယ်အရာကိုအပေါ်သွားသလဲ? အဘယ်သူမျှမပင်လယ်မရှိ gulls, လှိုင်းတံပိုး၏အသံမလည်းမရှိ။ သာငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်အဆုံးမှာ, ဗြဟ္မာတစ်ဦးအဆုံးမဲ့အလင်း …
အပြည့်အဝသတိပြုမိ … နောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအဖြူရောင်အလင်း, Moksha-, Nirvana အတွက်ကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျ၏ ineffable လွှတ်ပေးရန်, ငါ၏စုံလင်သောအဖြူရောင်အလင်းနိုးထအတွက် …